Family Program: တခ်ဳးဒိးတ့ဒိးဖ်ီသးဒ္ဘဥယ အိဥဃုဏမံဃုဏန႔ဥ မ့ႈက်ဲလ႕အဘဥတခါဧါ...19.11.2020 | Radio Veritas Asia
Family Program: တခ်ဳးဒိးတ့ဒိးဖ်ီသးဒ္ဘဥယ အိဥဃုဏမံဃုဏန႔ဥ မ့ႈက်ဲလ႕အဘဥတခါဧါ...19.11.2020
တခ်ဳးဒိးတ့ဒိးဖ်ီသးဒ္ဘဥယ အိဥဃုဏမံဃုဏန႔ဥ မ့ႈက်ဲလ႕အဘဥတခါဧါ.......(၁၉ယ၁၁ယ၂၀၂၀)
လ႕အပူၚကြံဏန႔ဥ (၅၀)အတီႈပူၚ လီၚဆီဒဥတႈ ပွၚအိဥလ႕ထံဂၚကီႈဂၚသ့ဥတဖဥ အါဒဥတႈတက့ႈ တခ်ဳးလ႕ အ၀ဲသ့ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒ္ဘဥအခါ အိဥဃုဏ မံဃုဏ၀ဲဒ္ နီႈဒီမါ၀ၚအသိးန႔ဥ ပထံဥဒီးပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲလ႕ လံဏအါဘ့ဥသ့ဥတဖဥ အပူၚန႔ဥလီၚ. တႈအ၀ဲန႔ဥ အါတက့ႈပွၚကိးဂၚ၀ါကိး၀ဲလ႕ (Living together) တႈအိဥဃုဏ မံဃုဏတပူၚဃီန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥစံး၀ဲလ႕ တႈဆ႕ကတီႈမ့ႈတုၚဃီန႔ဥ ကအိဥဃုဏဒီး ကဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ ပွၚဒီတႈအဲဥတီ (အတြဲ-၁၀)မဥ ဒိးန႔ဥ၀ဲဒီး ဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးအိဥဒဥထဲ (၂တြဲယ၃တြဲ)ဧိၚန႔ဥလီၚ. ပွၚအတြဲလ႕အဂၚသ့ဥတဖဥ လီၚမုႈလီၚဖးလိဏအသး မ့တမ့ႈတဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဘဥ ဘဥဆဥအိဥဃုဏယမံဃုဏဒဥ၀ဲ ဒ္နီႈဒီမါ၀ၚအသိးန႔ဥလီၚ.
ပွၚတနီၚနီၚစံး၀ဲလ႕ (Living together) န႔ဥမ့ႈ၀ဲ တႈတခ်ဳးဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒ္ဘဥအခါ မ့ႈ၀ဲတႈမၚကြႈ တႈလူၚဃုသ့ဥညါ တဂၚဒီးတဂၚ အတႈအိဥသးန႔ဥလီၚ. စံး၀ဲတႈအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈမၚကြႈလ႕ အဂ့ၚတခါန႔ဥလီၚ. မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲတႈဃုသ့ဥညါ လ႕အဂ့ၚတခါန႔ဥလီၚ. ပထံဥဘဥပ၀ဲလ႕ ပွၚလ႕တခ်ဳးဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒံးဘဥသ့ဥတဖဥ အိဥဃုဏ မံဃုဏ၀ဲတပူၚဃီဘဥဆဥ တႈအဲဥဒီးတႈနႈပ႕ႈ တႈအိဥဂ႕ႈဂ႕ႈက်႕ၚက်႕ၚ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥဘဥ. လ႕တႈန႔ဥအဃိ လ႕အ၀ဲသ့ဥ ကဟံဖိဟံလံၚအဂီႈစ့ႈကီး မ့ႈတႈ၀ံတႈဎိးဃ႕လ႕ အ၀ဲသ့ဥအဂီႈ ဒီးအသးတအိဥလ႕ ကဟံဖိဟံလံၚဘဥန႔ဥလီၚ’
ပွၚဒီတႈအဲဥခံဂၚ ဖဲအ၀ဲသ့ဥဃုသ့ဥညါဒီး သ့ဥညါလိဏအဂ့ႈတဂၚဒီးတဂၚ ဒီးအ၀ဲသ့ဥအတႈဂံႈစႈဘါစႈ အါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲအဆ႕တီႈ တႈစူဏတႈနဏ တႈအဲဥတႈကြံ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥ လီၚစွၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥဒ္ အ၀ဲသ့ဥအိဥဒီးတႈဆ႕ကတီႈလ႕ညါအသိးယ တႈဖံးတႈမၚ မ့ႈတႈကဲထီဥလိဏထီဥ အ၀ဲသ့ဥအတႈအိဥမူ တႈအိဥသးမ့ႈတလဲၚထီဥလဲၚထီဘဥန႔ဥ ကလီၚဖးလိၚအသးဒီး ကလဲၚက့ၚဒဥ၀ဲ တဂၚအနီႈကစႈအက်ဲဒဥ၀ဲစုဏစုဏန႔ဥလီၚ’ ကလဲၚယဖံးမၚ က့ၚဒဥဒ္အနီႈကစႈဒဥ၀ဲအက်ဲအသိးန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥမ့ႈလ႕ တႈပညိဥ တႈတိဏပဏ တႈဆ႕တဲဏသ့ဥတဖဥအံၚ အိဥပဏလ႕အခိဥနုဏပူၚ လ႕ညါလံအဃိယဒိးတ့ဒိးဖ်ီသးမ့ႈ၀ံၚဘဥဆဥ တႈဆ႕တဲဏသ့ဥတဖဥအံၚ အိဥဒံး၀ဲဒဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥအခိဥႏူဏပူၚန႔ဥလီၚ’
အဃိဖဲအ၀ဲသ့ဥ တူႈဘဥခီဥဘဥ၀ဲ တႈတဘဥလိဏဖိးဒ့လိဏသးဘဥအဆ႕ကတီႈ တဂၚအဆိကတ႕ႈ မ့ႈစံး၀ဲလ႕ မ္ပကမၚလီၚဖးက့ၚပက်ဲဖဲအံၚ အဆ႕တီႈအခါယ လ႕ခံတဂၚစံး၀ဲလ႕ ဂ့ၚလံယမ့မ့ႈဒ္န႔ဥ ပကစးထီဥမၚလီၚဖးက့ၚပက်ဲ ခဲအံၚန႔ဥလီၚ’ မ၀ဲသ့ဥအတႈဆ႕ကတီႈအံၚ ခ်႔၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥတႈဆ႕တဲဏအ၀ဲအံၚ တမ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥဆ႕တဲဏ၀ဲခဲအံၚဘဥ ဆ႕တဲဏဒီး အိဥလံ၀ဲဒီးတႈပညိဥတႈတိဏပဏ လ႕ညါခီလံန႔ဥလီၚ’ အဃိအ၀ဲသ့ဥစံး၀ဲ တႈလီၚဖးအတႈကတိၚ ညီ၀ဲဒီး ဟဲထီဥ၀ဲညီညီဖိလ႕အ၀ဲသ့ဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’
ပွၚလ႕တဒံးသိးလိဏအသးဘဥခံဂၚ ပွၚတမွံၚခံဂၚလ႕ ကအိဥဒ္သိးသိးအဂီႈ ကီခဲ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥဖဲအ၀ဲသ့ဥ ပဏတႈအဲဥတီအဆ႕တီႈအခါ တႈ၀ံသးစူၚ တႈနႈပ႕ႈ တႈအဲဥတႈကြံ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥ အိဥအဃိယအ၀ဲသ့ဥ အိဥဃုဏ မံဃုဏ၀ဲ (Living together) န႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥတုၚမ့ႈအိဥဃုဏ မံဃုဏ (Living together) အဆ႕ကတီႈဎံဏထီဥ၀ဲအဆ႕ကတီႈအခါ တႈ၀ံသးစူၚ တႈနႈပ႕ႈ တႈအဲဥတႈကြံ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥ ဒီးတုၚဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသး၀ံၚ တႈသ့ဥတဖဥအံၚဒီး တႈအိဥသးလ႕တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥ တအိဥလ႕ၚဘဥ တဒ္သိးလိဏလ႕ၚအသးဘဥန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’
ပွၚတနီၚနီၚဖဲ ပဏတႈအဲဥအဆ႕ကတီႈ တႈ၀ံသးစူၚ တႈနႈပ႕ႈ အိဥသနဏက့ ဖဲဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသး၀ံၚအခါ တႈ၀ံသးစူၚလ႕တဂၚဒီးတဂၚ အဖီခိဥတအိဥလ႕ၚဘဥန႔ဥ ပထံဥဘဥပ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ပထံဥဘဥလ႕ ဖဲအ၀ဲသ့ဥ ပဏတႈအဲဥတီအဆ႕တီႈ ဖီမ့ၚယဖီကသူ မ့တသ့ဘဥဆဥသနဏက့ယ တႈဆ႕ကတီႈဖဲ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီသး၀ံၚအခါယ တႈအ၀ဲအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈကီတႈခဲ တႈသဘံဥသဘုဥ တႈအ့ဥလိဏဆိးက့လိဏသးတခါန႔ဥလီၚ’
ပွၚစံး၀ဲလ႕ ဘဥဃးဒီး (Living together)န႔ဥ လ႕ပိဏခြါတဂၚအဂီႈ တႈဘဥဒိးဘဥထံး တအိဥနီတမံၚဘဥယ ဘဥဆဥသနဏက့ယ လ႕ပိဏမုဥတဂၚအဂီႈ အသးမ့ႈပွႈထီဥ မ့တမ့ႈသးနံဥမ့ႈဒိဥထီဥန႔ဥ ကတူႈဘဥ၀ဲတႈကီတႈခဲယ တႈဘဥဒိးဘဥထံးယ တႈသးဘဥဖွီဥန႔ဥလီၚ’